I-Oukitel U23: inotshi kunye nombala wegradient ngasemva | I-Androidsis
Kule minyaka mibini idlulileyo, siyibonile indlela inkampani yaseAsia iOukitel eyazi ngayo indlela yokuziqhelanisa nemarike ngokulandela iindlela zentengiso, ukongeza ekugxileni kuluhlu lwee-smartphones ezinganyangekiyo kokubini ukuwa kunye nokothuka, ukuze gubungela imakethi ekwimfuno ephezulu.
I-Oukitel ibhengezwe ngokusesikweni phakathi ku-Okthobha, iyakuba yintoni iflegi yayo elandelayo, i-U23, imodeli eyamkela inotshi ngezandla ezivulekileyo kwaye iyakusinika nesiphelo umbala wangorhatya ngasemva ngohlobo lwegradient, njengaleyo ifunyenwe kwiHuawei P20 Pro.
Enye into entsha esiza kuyifumana kule modeli ifumaneka kwinkqubo yokutshaja, kuba iya kuba ngaphandle kwamacingo, yenye yeetheminali zokuqala zenkampani ukuyiphumeza. Isikrini se-U23, sifikelela kwifayile ye- I-intshi ye-6.18 ene-FullHD + isisombululo ngomboniso weLCD.
Eli qela lenziwa yi-Huaxing, ngokutsho komenzi, lisinika ezinye imibala ebonakalayo kunye nokusondela kwinyani kunezinye iimodeli zohlobo olufanayo lwesikrini esinokuthi silufumane kwintengiso.
Ngaphakathi kwe-Oukitel U23 sifumana eyona processor inamandla yeMediaTek, i IHelio P23 ihamba ne-6 GB ye-RAM. Ibhetri yale modeli intsha ifikelela kwi-3.500 mAh kwaye iya kuhamba kunye nenkqubo yokugcina amandla eyilelweyo xa ibhetri iphantsi. Iqela liphela liya kulawulwa yi-Android 8.1.
Enye yezinto ezinomdla kakhulu kwesi siginali, siyifumana ngasemva, umva osibonisa a umbala wegradient, ukusuka kohlaza okwesibhakabhaka ukuya emfusa, Igradient leyo, kuxhomekeke ekukhanyeni, iya kubonisa imibala eyahlukileyo.
Ukuphehlelelwa kwe-Oukitel U23 icwangciselwe umbindi waphakathi kuNovemba Ngexabiso elingekabhengezwa, kodwa ukwazi inkampani, ngokuqinisekileyo kuya kusinika ngaphezulu kwexabiso elinomtsalane lemali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Oukitel U23: inotshi yombala kunye negradient ngasemva
IMotorola isungula i-Android Oreo 8.1 yeMoto G5 kunye neG5 Plus